PSJTV | डाक्टर कति बिरामी ?
शनिबार, ०९ असार २०७५ पिएसजे न्युज
काठमाडाैं, ९ असार ।
डाक्टर बिरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिन्छन् । दैनिक सयौँ बिरामी जाँचेर स्वस्थ रहने उपाय पनि सुझाउँछन् । तर, दुनियाँलाई स्वस्थ राख्न योगदान पु-याउने डाक्टरकै स्वास्थ्य पनि पूरै ठीक भने हुँदैन । कामको चाप तथा व्यस्तता र जीवनशैली व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा वरिष्ठ डाक्टरहरू पनि कुनै न कुनै रोगले पीडित हुने गरेका छन् । यद्यपि, आमबिरामीभन्दा डाक्टरहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति स्वाभाविक रूपमा बढी सचेत हुन्छन् । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएर तथा जीवनशैली व्यवस्थित गरेर रोगलाई नियन्त्रणमा राख्छन् ।
ढाड दुख्ने पुरानै समस्या छ : डा. भोला रिजाल
वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ
धेरै वर्षदेखि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको छु । नियमित जाँचकै क्रममा मुटुमा समस्या देखिएपछि तत्काल उपचार गर्ने निर्णय लिएँ । नेपालमा सक्षम चिकित्सक र उपकरण भएका कारण मेरो उपचार मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भरत रावल, डा. लव जोशी र डा. यादव भट्टले गरे । अहिले मुटुमा कुनै समस्या छैन । ढाड दुख्ने समस्या भने पुरानै हो । ढाडको समस्या पनि डा. वसन्त देवकोटा र डा. गौरवराज ढकालले हेरेका छन् । अहिले ओम अस्पतालमा डा. चन्द्रमणि पौडेलसँग नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको छु ।
कहिलेकाहीँ जोर्नी दुख्छ : डा. मानबहादुर केसी वरिष्ठ
अहिलेसम्म कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या छैन । घरपरिवारमा पनि कसैलाई कुनै रोग छैन । मुटुरोग विशेषज्ञ भएकाले पनि प्रत्येक वर्ष मुटुसम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच गराउँछु । कुर्सीमा नियमित बसेका कारण र अप्रेसनमा उभिनुपरेकाले जोर्नी दुख्ने समस्या छ । मैले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका अर्थोपेडिक डा. दिनेश काफ्लेसँग स्वास्थ्य जाँच गराउँदै आएको छु ।
ब्लडप्रेसर बढ्दै छ : डा. लोचन कार्की
नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने गरी अहिलेसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । ढाड दुख्ने समस्या भने छ । नियमित बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा खटिनुपर्दा दुखाइ बढ्छ । ढाड र गर्धन दुखे पनि औषधि सेवन भने गर्नुपरेको छैन । आफैँ फिजिसियन भएकाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएर रिपोर्ट हेर्छु । पछिल्लो समय ब्लडप्रेसर पनि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य जाँच गराउँछु ।
ढाड दुख्ने समस्या छ : प्रा. डा. जगदीश् अग्रवाल, डिन, आइओएम
ढाड दुख्ने समस्या छ । तर, हाल कम भएको छ । अरू समस्या भने छैन । आफैँ चिकित्सक भएको हिसाबले सामान्य जाँच आफैँ पनि गर्छु । फरक विधाको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपरे साथीहरूलाई देखाउँछु । हाडजोर्नीको समस्याबारे शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीलाई देखाउँछु ।
ग्यास्ट्रिकको समस्या छ : डा. गोविन्द केसी
र्थोपेडिक, शिक्षण अस्पताल
स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या थियो भने अनशन बस्न कसरी सक्थेँ र ? स्वास्थ्य परीक्षण समय–समयमा गराइरहन्छु । कुर्सीमा धेरै बस्नुपर्ने भएकाले ढाड दुख्ने समस्या भने छ । ग्यास्ट्रिकको समस्या पनि छ । स्वास्थ्य समस्या देखिँदा सामान्य नागरिकले झैँ सिफ्टमा भएको डाक्टरसँगै जचाउँछु । अनशनको समयमा भने डा. दिव्यासिंहलगायतको टोलीले स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका छन् ।
सुगर र प्रेसर छ : डा. राजेश सिंह
तीन वर्षदेखि सुगर र प्रेसर छ । नियमित औषधि सेवन गरिरहेको छु । हरेक ६–६ महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछु । अरू रोग भने छैन । नेपाल मेडिकल कलेजका डा. प्रमोद क्षेत्री र डा. युएन पाठकसँग नियमित परीक्षण गराउँछु । नेपालबाहिर गएर स्वास्थ्य जाँच गराएको छैन ।
ब्लडप्रेसरले सताएको छ : डा. सरोजप्रसाद ओझा
मानसिक रोग विशेषज्ञ’ शिक्षण अस्पताल
उच्च रक्तचापको समस्या छ । लामो समय भइसक्यो । नियमित औषधि सेवन गर्दै आएको छु । मनमोहन कार्डियोभास्कुलर थोरापिक एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत डा. रत्नमणि गजुरेल, डा. ओममूर्ति अनिल, डा. यादव भट्ट र डा. दिवाकर शर्मासँग नियमित परीक्षण गराउँछु । उच्च रक्तचापबाहेक अरू समस्या छैन ।
५ वर्षदेखि ब्लडप्रेसर छ : डा. जागेश्वर गौतम
स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ
मलाई ब्लडप्रेसरको समस्या छ । ५ वर्षदेखि निरिन्तर प्रेसर सन्तुलन गर्ने औषधि सेवन गरिरहेको छु । कहिलेकाहीँ निकै नै समस्या पार्छ । प्रेसरबाहेक अरू कुनै रोग अहिलेसम्म देखिएको छैन । ओम अस्पतालमा कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रमणि पौडेलसँग नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको छु ।
ब्लडप्रेसरको समस्या छ : डा. भरतकुमार यादव
ब्लडप्रेसरको समस्या छ । नियमित औषधि खान्छु । अरू समस्या भने छैन । स्वास्थ्य परीक्षण कहिले गराउने भनेर यकिन हुँदैन । आफू फिट रहेकाले दुई–तीन वर्षमा एकपटक जचाउँछु । प्रेसर देखिएको पाँच वर्ष भयो । पाटन अस्पतालमा कार्यरत फिजिसियन डा. आशिष श्रेष्ठसँग जचाउँछु । दिनभर फ्रेस हुन अस्पताल हाताभित्रै मर्निङवाक गर्छु ।
सुगर, प्रेसर र मुटुको समस्या छ : डा. प्रेमराज ज्ञवाली
इुरोलोजिस्ट, टिचिङ हस्पिटल
दुई वर्षअघि मर्निङवाकमा निस्किएको थिएँ । स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थिएन । दिउँसो स्वास्थ्य जाँच गर्ने उद्देश्यले आफ्नै अस्पताल (शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज) गएँ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मुटुमा समस्या देखियो । अस्पतालकै चिकित्सकले अप्रेसन गरेर स्टेन्ट हालेका छन् । मलाई सुगर, प्रेसरको समेत समस्या छ । दुई वर्षदेखि निरन्तर औषधि सेवन गरिरहेको छु । डा. रत्नमणि गजुरेल, डा. ज्योति भट्टराई र डा. यादव भट्टले मेरो स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भने म गर्छु ।
अहिलेसम्म कुनै रोग देखिएको छैन : डा. अनिल भट्टराई
मुटुरोग विशेषज्ञ, मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर
अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन । सुगर, प्रेसर सबै ठीक छ । हरेक ६–६ महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछु । आफैँ चिकित्सक भएका कारण रिपोर्ट अरूलाई देखाउनुपर्दैन । अरूलाई देखाउनुपर्ने गरी कुनै गम्भीर रोग देखिएको छैन ।
ढाडमा दुख्ने र युरिक एसिडले सताउँछ : डा. केदारनरसिंह केसी
छातिरोग विशेषज्ञ (रिटायर्ड)
ढाड दुख्ने समस्या हाम्रो पारिवारिक रोग नै हो । अरू रोग भने अहिलेसम्म लागेको छैन । खसीको मासु बढी खाए युरिक एसिड बढ्छ । यो अवस्थामा आफैँ केयर गर्छु । प्रत्येक ६ महिनामा स्वास्थ्य जाँच गराउँछु । डा. मानबहादुर केसी, डा. राजीवराज भण्डारी र डा. यादवदेव भट्टसँग जचाउँदै आएको छु ।
नियमित प्रेसरको औषधि खान्छु : डा. ढुण्डीराज पौडेल
०५६ देखि ब्लडप्रेसरको समस्याले सताइरहेको छ । परिवारमा अरूलाई पनि छ । प्रेसर भएको जानकारी पाएदेखि नियमित औषधि सेवन गरिरहेको छु । विभागीय डाक्टरहरूबाटै हरेक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछु ।
स्वस्थ रहन के गर्छन् डाक्टर ?
आफ्नै गार्डेन र कौसीमा हिँड्ने गर्छु : डा. अरुण सायमी, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ
बिहान र बेलुका नै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । समयानुकूल जतिखेर हिँडे पनि हुन्छ, हिँड्न भने प-यो । मुटुका बिरामी, उच्च रक्तचापका बिरामीले जाडो महिनामा बिहान हिँड्दा हृदयाघातको जोखिम हुन्छ । पहिलेजस्तो बिहान ट्रफिक कम हुन्छ, हावा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन अहिले ।
बिहानको हावा निकै प्रदूषित छ । गाडीले हानिदिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । पार्क तथा ठूलो चौर छ र प्रदूषण छैन भने मर्निङवाक गर्नु राम्रो हो । नभए घरमै व्यायाम गर्दा हुन्छ । म पनि आफ्नै गार्डेन र कौसीमा हिँड्छु । अस्पतालमा पनि सकेसम्म धेरै समय हिँडिरहन्छु । घरमै क्रस ट्रेनरमा पनि हिँड्छु, यो ट्रेडमिलजस्तै हो ।
अफिसमा ६ हजार पाइला हिँडेको मोबाइलले देखाउँछ : चन्दा कार्की, वरिष्ठ प्रसूतिरोग विशेषज्ञ
बिहान घामले पोल्दैन, तर हावा प्रदूषित हुन्छ । त्यसले अर्को स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । हामीकहाँ पार्क र फुटपाथ गतिला छैनन् । गाडीवालाले फुटपथमै हानिदेलान् भन्ने जोखिम पनि छ । राम्रो वातावरण र अनुकूल भए त मर्निङवाक गरेको राम्रो हो । तर, घर या क्लबमै शारीरिक कसरत गरे पनि हुन्छ । जे होस् भ्याएसम्म हिँड्न कहिल्यै नछाड्नुस् । म पनि भ्याएसम्म दैनिक ४० मिनेट हिँड्छु । दिउँसो अफिसमा ६ हजार पाइला हिँडेको मोबाइल एप्समा देखिन्छ ।
दिउँसो एक घन्टा हिँड्ने गर्छु : डा. ज्योति भट्टराई, वरिष्ठ मधुमेहविज्ञ
नियमित आधा घन्टा व्यायाम आवश्यक छ । नियमित व्यायामले शरीर चलायमान हुन्छ । मांशपेशी कसिला हुन्छन्, बोसो पग्लिन्छ । नियमित हिँड्दा शरीर फुर्तिलो हुन्छ, तनाव कम हुन्छ, ग्लुकोज खपत भई सुगर नियन्त्रण हुन्छ ।
समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि हिँड्नु आवश्यक छ । यसले सकारात्मक सोच विकास हुन्छ, आत्मविश्वास बढ्छ । तर, बिहान नै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । म आफैँ पनि दिउँसो एक घन्टा हिँड्छु । सुगरका रोगी र बुढाबुढी त बिहानको चिसोमा हिँड्नु झन् घातक हुन्छ । चिसोमा हिँड्नाले हृदयाघात भएर अस्पताल आएका केसहरू छन् । यसको मतलब, मर्निङवाक गर्दा हृदयाघात नै हुन्छ भनेको चाहिँ होइन ।
घरपछाडि जंगल छ त्यहीँ मज्जाले हिँड्छु : डा. अर्जुन कार्की, इन्टरनल मेडिसिनविज्ञ
मर्निङवाक विवादास्पद विषय हो । मर्निङवाक कहाँ गर्ने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ । ठूलो पार्क छ, धुँवा–धुलो छैन भने ठिकै हुन्छ । सडकमै हिँड्नुपर्ने हो, गाडीको धुवाँ–धुलोले असर गर्छ भने मर्निङवाक गरेर फइदा हुँदैन । म त घरपछाडि जंगल छ, बिहान नियमित त्यहीँ हिँड्छु । तर, जाडो महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषित हावा तल आएर बस्छ । भौगोलिक बनावटका कारण काठमाडौंमा यो मौसममा बिहान हिँड्नु स्वस्थकर हुँदैन । दिउँसो घाम लागेर तातेपछि विषाक्त धुलोहरू माथि जाने भएकाले घाम छिप्पिएपछि हिँड्नु राम्रो हुन्छ । तर, बिहानबाहेक हिँड्ने समय नै मिल्दैन भने प्रदूषित नै भए पनि हिँड्न मेरो सुझाब छ ।
स्वस्थ रहन डाक्टरका आठ टिप्स
आजकाल जीवनशैली निकै व्यस्त छ । मान्छेलाई कमै फुर्सद मिल्छ । रोजगारी, पैसा र करिअरको पछि भाग्दाभाग्दै धेरै मानिसलाई आफ्नै शरीरको ख्याल राख्ने फुर्सद छैन । एक हिसाबले जीवन यान्त्रिक बनेको छ । तर, रोजगारी र पैसाभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य नै हो । स्वास्थ्य नै ठीक छैन भने अरू कुरा ठीक भएर कुनै अर्थ नहुने डाक्टरहरू बताउँछन् । डा. सरोज ओझाका अनुसार स्वस्थ जीवन भनेको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ हुन हो । स्वस्थ रहनका लागि यी कुरामा सम्झौता नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाब दिएका छन् :
सकेसम्म सन्तुलित आहार खानुपर्छ । चिल्लो, गुलियो र नुनिलो कम खानुपर्छ । पौष्टिक तत्वयुक्त, रेसादार खानेकुरा, फलफूल, हरियो तरकारी, सलाद, माछा, मासु, अन्डा नियमित रूपमा खार्नुपर्छ ।
नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवनका लागि अत्यावश्यक छ । व्यायामले पूरै शरीर चलायमान हुन्छ । सबै अंगमा ऊर्जा पुग्छ । हरेक दिन बिहान आधा घन्टा मर्निङवाक वा व्यायाम वा योग आफ्नो सुविधाअनुसार गर्नुपर्छ ।
सही खानपान र नियमित व्यायामजत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को पाटो हो पर्याप्त निद्रा । स्वस्थ्य रहन पर्याप्त सुत्नुपर्छ । राति सुतेजस्तो राम्रो अरू वेला सुतेको हुँदैन । न्यूनतम ७ देखि ८ घन्टासम्म सुत्नुपर्छ । ८ घन्टाको सुताइले १६ घन्टासम्म शरीर फुर्तिलो र स्वस्थ रहन्छ ।
धूमपान र मद्यपान त्याग
धूमपान र मद्यपानले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन । बरु लामो समय धूमपान र मद्यपान गर्नाले मुटुरोग र फेक्सोको क्यान्सरसमेत गराउ“छ । तनाव भयो भनेर चुरोट र रक्सीको लतमा फस्नु राम्रो होइन । यसले कतिपय अवस्थामा पारिवारिक र सामाजिक समस्या पनि निम्त्याउने गर्छ ।
स्वस्थ रहन पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ । २४ घन्टामा कम्तीमा ३ लिटर पानी पिउनैपर्छ । गर्मीको समयमा पसिना जाने र डिहाइड्रट हुने भएकाले अझ धेरै पानी पिउनुपर्छ । पानी कम भए शरीरका क्लिनिकल चिजहरू असन्तुलित हुन्छन् । टाउको दुख्ने र रिँगटा लाग्ने समस्या हुन्छ ।
स्वस्थ्य रहन मानसिक स्वास्थ्य पनि ठीक हुनुपर्छ । हिजोआज धेरै व्यक्ति विभिन्न तनाव बोकेर हिँड्छन् । स–साना कुराले पनि तनावमा आउँछन् । कुनै पनि कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिनु तनाव निम्तिने कारण हो । डिप्रेसनमा जाने र आत्महत्या गर्नेसम्मको सोच आउन सक्छ । तनाव भयो भनेर श्रीमतीसँग झगडा गर्ने, बच्च पिट्ने गर्नुहुँदैन । हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य पनि स्वस्थ जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो । सामाजिक स्वास्थ्यका लागि सामाजिक कर्महरूमा सरिक हुनुपर्छ । पत्रपत्रिका र पुस्तक पढ्ने, समाचार हेर्ने, परिवारसँग बसेर घुम्ने तथा रमाइलो गर्ने, आफन्त र साथीभाइसँग भेटघाट गर्दा सामाजिक रूपमा स्वस्थ भइन्छ ।
२४ घन्टामा एकपटक १०–१५ मिनट भगवान्को आराधना गर्नु, ध्यान गर्नु, प्रार्थना गर्नु, भजन सुन्नुपर्छ । यस्ता आध्यात्मिक कर्मले पनि स्वस्थ बनाउँछ । तनाव कम हुन्छ ।
गत वर्षभन्दा दुई गुणा प्रदूषण
गत हप्ता शुक्रबार बेलुकादेखि तराई र पहाडी क्षेत्रमा धुलो मिसिएको पहेँलो वर्षा भयो । थार मरुभूमिबाट राजस्थान हुँदै नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा धुलोसहित वर्षा भयो । अहिले धुलो मिसिएको वर्षा रोकिए पनि असर पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन ।
‘वर्षा मौसममा सामान्यतया कम प्रदूषण हुन्छ,’ वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकर पौडेलले भने, ‘तर, गत शनिबारदेखि मंगलबारसम्म राजधानीको हावामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर प्रदूषण भयो ।’
चितवनको सौराहा, रूपन्देहीको लुम्बिनी र ललितपुरको पुल्चोकको हावामा अघिल्लो मनसुनको तुलनामा यो वर्षको १ जेठदेखि प्रदूषण बढ्दै गएको देखियो । ५ जेठसम्म गत वर्षको तुलनामा दुई गुणाभन्दा पनि बढी प्रदूषण देखिएको पौडेलले बताए । उपत्यकाको बनोटअनुसार बिहानको चिसोमा विषाक्त धुलो तल आउने र घाम लागेपछि प्रदूषित धुलोका कण उडेर माथि जाने उनले बताए । यद्यपि, बिहानको हावामा हानिकारक धुलोको मात्रा बढी हुने भए पनि हिँड्न तथा व्यायाम गर्न भने छोड्न नहुने पौडेलको भनाइ छ ।
काठमाडौं: अमेरिकाले नेपाली महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ । यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकारलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुदृढ तुल्याउन ...
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गर्ने ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले चन्द्रागिरि, नागार्जुन, कीर्तिपुरलगायतका विभिन्न स्थानबाट हराएका नौ वटा मोटरसाइकलसहित ११ जनालाई ...